October 2021 – List Khabar
October 31, 2021 स्वास्थ्य 0
यो त तपाई सबैलाई थाहा नै होला, हामी ४ पोजीसनमा सुत्ने गर्छौ। जुन हो एउटा दायाँ तर्फ, बायाँ तर्फ,सिँधा र उल्टो। हामी सबै यस्तै पोजीसनमा सुत्ने गछौँ । तपाईले देख्नुभएकै होला, जब हामी सुत्छौँ, सुत्दा सुत्दा डराउँछौँ। या कुनै अनौँठो सपना देखेर सुत्न सक्दैनौ। कैँयौ चोटी पोजीसन नमिल्दा बिरामी पनि …
October 31, 2021 जीवनशैली 0
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) सावधान रहनुहोला। सरकार- विरोधी कार्य सकेसम्म नगर्नुहोला। दुर्घटनाबाट बचेर हिड्नुहोला। बाहिरको खानपिनको बानीको कारण स्वास्थ्य बिग्रिन सक्ला। कार्य समयानुसार पूर्ण हुनेछैन। व्यवसायमा सम्हालेर चल्नुहोला । तपाईको पक्षमा उच्च अधिकारी रहनेछैनन्। सन्तानसँग मतभे खडा हुन् सक्ला। महत्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला। …
October 31, 2021 समाचार 0
काठमाडौं । बैंकमा कर्मचारीहरुलाई तिहारमा ४ दिन बिदा दिइएको छ । यस वर्षको तिहारमा बैंकमा कर्मचारीलाई कात्तिक १८ गतेदेखि २१ गतेसम्म बिदा दिइएको हो नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले यस अघि उक्त दिन बैंकहरु बिदा हुने सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।जसअनुसार कात्तिक १८ गते लक्ष्मी पुजा/महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्मजयन्ती …
काठमाडौं कात्तिक १४ । बसमा सवार यात्रुलाई हातपात गरी नगद लुटेकाे अभियाेगमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । धादिङबाट वीरगंजतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख.५३७२ नम्बरको बसका यात्रुको नगद १ लाख ५ हजार रूपैयाँ लुटपाट गरेको अभियोगमा सोही बसमा सवार काभ्रे घर भएका ३० वर्षीय राजु लामासहित २ जनालाई …
October 31, 2021 रोचक 0
सम्बन्ध बिगार्ने यस्ता समाचार प्रायः सुन्न र देख्न पाइन्छ । मानिसको नियत बिग्रदै गएको छ र साथमा सम्बन्ध पनि बिग्रदै गएको छ ।घर भित्र होश या बाहिर मानिसले यस्तो काम गर्छन् कि पवित्र सम्बन्ध माटोमा मिल्छ। यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तर प्रदेशबाट बाहिर आएको छ जहाँ ससुराले बुहारीसँग बिहे गरे …
के तपाईलाई हात खुट्टा तातेको, निदाएको, झमझमाएको महसुस भएको छ ? शरीर को अंगहरु झमझमाउने, निदाउने, पोल्ने, कारणहरु बिभिन्न छन्। जसमा के हि प्रतिशत अन्य रोगको कारणले पनि हात, खुट्टा र शरीर झमझमाउँछ। हात, खुट्टा, शरीर निदाउनु, पोल्नु, झमझमाउनु को बारेमा बुझौं। तपाइले हात वा खुट्टा निदाएको वा झमझम गरेको …
मुखको र्याल् भोजनको पाचन प्रणलीको लागी महत्वपूर्ण मानिन्छ। र्‍याल मा एमाइलेज नामक पाचक पाइन्छ जोसले भोजनम उपस्थित स्टार्चलाई सर्करामा बदलदिन्छ। हेर्दै रसिलो, झरिलो, स्वादिलो खानेकुरा देख्नै हुन्न, हाम्रो मुखमा पानी आइहाल्छ। आफूलाई मन परेको खानेकुरा देख्नासाथ हामीमध्ये धेरैको मुखबाट पानी निस्कने गर्छ। मिठो खानेकुरा वा अमिलो, पिरो खानेकुरा देख्दा मुखबाट …
Home समाचार समाज दिनेश रातारात भए करोडपति, महिना दिनको मिहिनेतले बनायो मालामाल ! October 31, 202130 काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्नातकमा इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दा दिनेश न्यौपानेलाई कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज र प्रोग्रामिङ दिक्क लाग्थ्यो। तर, इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भएकाले त्यसबाट भाग्ने उपाय पनि थिएन। उनले त्यो सिकेरै छाडे। त्यसका माध्यमबाट एपहरु बनाउन सकिन्थ्यो। उनले फुर्सदमा …
तपाईलाई यौनमा के मन प्रछ भन्ने प्रश्नमा मोडल अञ्जली अधिकारीको यस्ताे जवाफ (भिडियोसहित)
October 31, 2021 मनोरंजन 0
मनोञ्जन दुनियाँका हसिला रसिला अन्र्तवार्ता लिने उत्सव रसाईलीसँगको कुराकानीमा उनले आफू कन्याकुमारी (भर्जिन) नरहेको खुलासा गरेकी हुन् । अविबाहित मोडल अञ्जली अधिकारीलाई उत्सव रसाईलीले आर यू भ र्जिन भनेर प्रश्न गर्छन् । उनले बडो शानका साथ नो भन्छिन् । अञ्जलीले नो भन्दा उत्सव रसाईली अचम्ममा परेजस्तो गर्छन्। त्यसपछि उसले फेरी …